Kedu ihe bụ brinicle na otu esi kpụrụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Brinicle ma ọ bụ mkpịsị aka ọnwụ, ajọ ifufe nke oké osimiri
Monica sanchez | | Ihe ikuku
Ọ bụrụ na ịnwee ohere iji gaa ebe oyi dị ka mpaghara Antarctic, ma ọ bụrụ na ị nwaa ịbanye n'ime mmiri, kpachara anya. O yikarịrị ka ị ga-agafe oke ikuku mmiri, nke amara aha ya brinicle, ma ọ bụ ogwe aka ọnwụ.
Ọ bụ ngosipụta pụrụ iche nke okike, ikekwe ihe ịtụnanya kachasị nke ihe niile na-eme n'oké osimiri. You chọrọ ịma ka esi kpụọ ya?
Na ụwa ,wa, achọpụtabeghị ihe ọ bụla, na n'eziokwu, ọ bụghị ruo na 1960 ka a maara na brinicle dị adị n'ezie, na 2011 e depụtara ya na nke mbụ na nkwụsịtụ oge. Ma gịnị ka ọ bụ? Ọfọn, ihe a dị ịtụnanya bụ n'ezie stalactite ice nke na-etolite na mmiri Antarctica n'ihi ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ ma na elu (nke dị gburugburu -20ºC) na n'ime omimi (- 2 Celsius). Ya mere, mmiri nnu, mmiri nke ogo ya dị ogo dị elu karịa efu, na-abanye na mmiri oke osimiri, nke dị ọkụ, ma si otú a na-etolite ice stalactite.
Na mbụ, ọ na-echetara nnọọ olulu miri emi nke ice nke na-agbada ala. N'ime ya, e nwere mmiri dị ezigbo oyi nakwa na o nwere oke nnu, nke na-agbakọba na ọwa. Na nke a, ọ bụ usoro na-emebi emebi, ebe ọ bụ na mgbidi ahụ dị gịrịgịrị ma ọ kwesịrị "iri nri" na nnu iji nọgide na-eto. Agbanyeghị, ka nke a mee, ọnọdụ ga-adị ka ndị a:
Mmiri dị n'akụkụ ọkpọkọ kwesịrị ịdị ntakịrị obere saline karịa nke dị n'ime ya.
Mmiri ọ pụghị ịdị omimi nke ukwuu.
Mmiri dị na mpaghara ahụ ga-echekwa wetuo obi.
Ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a dị mma, ị nwere ike rute n’ala wee gafee ogologo ụzọ. Ka ọ dị ugbu a, ọ ga-ahapụ web ice nke ga-eme ihe ọ kacha mma: dichaa ihe niile n'ụzọ ya, ma ọ bụrụ kpakpando ma ọ bụ urchins n'oké osimiri, azụ, crabs ... ihe ọ bụla. Ma ọ bụghị, naanị ga-adajụ.
Na mgbakwunye, "ogwe aka" ahụ dị oke oyi ma sie ike nke na ka ọ na-aga n'ihu ọ gaghị atụfu nkwụsi ike, yabụ ọ na-ejigide ọdịdị ya na ọbụnadị na-abawanye mgbe ọ na-abanye n'oké osimiri, ebe ọ nwere akwa mkpuchi nke jet mmiri saline oyi na-asọpụta. Akwa a na-egbochi ya ikpo ọkụ, ya mere ọ ga-anọgide na-agbadata ma mepụta ice ọzọ. Nke a bụ n'ihi nnu na-eme ka ebe oyi kpoo… ọzọ. Yabụ, brinicle na-esiwanye ike, na-eju anya ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Nke bụ eziokwu bụ na nnu, ebe brinicle na-aga n'ihu oyi, na-apụta site na etu esi ekwu ya, na-eme ka mmiri gbara ya gburugburu dị nnu. Enwere ike ịsị, na anyị agaghị ehie ụzọ, na ihe ịtụnanya a "na-eri nri" na nnu, yabụ ugboro ugboro okirikiri ga-amaliteghachi ... ruo mgbe enwere nnukwu mgbanwe na ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ omimi nke oke osimiri.
Ogo nke brinicle ahụ bụ amachaghị. Ọ ga-adabere na mmiri gbara ya gburugburu, omimi nke mmiri ahụ, yana uto nke ice nke otu ma ọ bụ nke ọzọ nwere. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ na-adọrọ mmasị.
Emebere usoro a na nke mbụ na 2011, na agwaetiti Razorback, na Antarctica, site n'aka Kathryn Jeffs na igwefoto Hugh Miller na Doug Anderson maka BBC. Oké osimiri dị gburugburu -2ºC, mana ha nwara ịmaba na uwe kwesịrị ekwesị, na enweghị obi abụọ kwụrụ ụgwọ maka obi ike ha. Dekọọ otu n’ime ihe ịtụnanya dị ịtụnanya dị ịtụnanya n’ụwa, ọkachasị n’oké osimiri kpụkọrọ akpụkọ dị ka Antarctica.
Yabụ, n'okpuru elu ice kpuchie ebe anụ ọhịa bea, ọdụm n'oké osimiri, penguins na anụmanụ ndị ọzọ na-eme ihe ha na-eme kwa ụbọchị na-achọ ihe ha ga-eri, ụgbọ mmiri mmiri mmiri na-abanye n'oké osimiri na, ọ bụrụ ọ dị ezigbo oyi, ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu nke a na-akpọ ajọ ifufe nke oké osimiri ịmalite, nke amara aha ya brinicle ma obu mkpisi aka nke onwu.
Anyị ka nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amụta site n'okike, ọ ga-abụ na ọ nwere ihe karịrị otu ihe ịtụnanya na-echere anyị. Amabeghị mgbe mmadụ ga-ahụ ihe ngosi dị otu a ọzọ, ihe a ma bụ na mgbe ọ mere, ga-eju ọzọ.
Kedu ihe ị chere? Na-akpali mmasị, nri? Ihe brinicle na-aga n’ihu n’ike n’ike, na-adọkpụrụ ihe niile ọ hụrụ na ya. Yabụ ọ bụrụ na ịnwee ohere ị ga-ahụ nke ọma, nwee ọ ,ụ ya… mana site n’ebe dị anya, ọ bụrụ na.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Brinicle ma ọ bụ mkpịsị aka ọnwụ, ajọ ifufe nke oké osimiri
Ọ dị ezigbo mkpa ka ị banye ebe a na ekele maka ihe niile
Ngwakọta nke ikuku ụwa
Ọdịiche dị n'etiti mmiri ihu igwe na mbara igwe